Breaking…. पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको बनाउँदै गरेको घरमा ब,म वि’स्फोट…हेर्नुहोस!
काठमाडौं । पूर्वसञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बनाउँदै गरेको घरमा ब,म वि’स्फोट भएको छ । भक्तपुरको लोकन्थलीमा नि,र्माणाधीन घरको गेटमा बुधबार बिहान ब,म वि’स्फोट भएको हो ।प्रहरीले दिएको जानकारीअनुसार कुकर ब,म वि’स्फोट भएको पुष्टि भएको छ ।
गोकुल बाँस्कोटाको घरमा कुकर ब,म वि’स्फोटबाट छिमेकीको घरमा समेत सा,मान्य क्ष,ति पुगेको छ । ब,म बिहान ७ बजेतिर वि’स्फोट भएको थियो । वि’स्फोटमा परेर घरको गेटमा क्ष,ति पुगेको छ भने घरका झ्यालमा लगाइएका सिसा फुटेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी तथा प्रवक्ता श्याम ज्ञवालीका अनुसार ब,म विप्लव समूहले वि’स्फोट गराएको आ,शंका गरिएको छ । विप्लव समूहलाई सरकारले प्र,तिबन्ध लगाएको आज एकवर्ष पूरा भएको छ ।निवर्तमान मन्त्री बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा ७० करोड क,मिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रा,जीनामा दिएका थिए ।
बाँस्कोटा भने अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बालकोटस्थित घरमा बस्दै आएका छन् ।उनले लोकन्थलीमा नयाँ घर बनाइरहेको बताइएको छ । सोही घरमा नै वि,स्फोट भएको हो ।